Yini Pets Yakho Yembulani Ngawe
by Li Yen
Igcine ukubuyekezwa: May. 21 2019 | 3 imiz ufunde
Zithanda noma zingathandi, indlela siqhubeka siphila uthi okuningi mayelana izici ezihlukahlukene zobuntu bethu. Ngokwesibonelo, nomuntu ngokucophelela emsebenzini ngokuvamile banombono athe alukhuni towards ekuphileni ukuthambekela sokulindela ukuphelela. Ngokwesinye isandla, ungakwazi cishe ezithile ukuthi engisebenza naye wafika ehhovisi isoso on leyembe lakhe emikhonweni mhlawumbe akukhona umuntu ngokucophelela kakhulu. Kunjalo, lokhu akufanele kube barometer of ubuntu bomuntu jikelele. Nokho, zingabantu inkomba ephephile kanjani umuntu bebungeke bona ukuphila. In extension lokhu, Abantu abakhetha izilwane ezahlukene njengezilwane ezifuyiwe ngokuvamile ukwabelana izici ezithile.
Izindaba ezinhle ukuthi abanikazi bezinja kakhulu onakekelayo, efudumele yithemba futhi izinikele. Phela, izinja kudingeka zinakekelwe. Uma umlingani wakho ungumuntu inja, kukhona ithuba eliphezulu kakhulu ukuthi bavame ukuba uthando in the ubuhlobo. Abathandi Dog uzophinde banakekele ngenxa yokuthi nje ukuthi izinja emva konke zidinga kakhulu ukunakwa kanye. Enye into enhle mayelana abanikazi bezinja iqiniso lokuthi izikhathi iningi, zingabantu enokwethenjelwa kakhulu futhi ngobuqotho lot.
Cats bebelokhu baziwa ukuba ongangeneki kakhulu nabantu. Nokho, kunjalo futhi izidalwa ngokwedlulele ebucayi futhi empeleni alangazelela lomzwelo. Abanikazi Cat ukuyichazela izici ezifanayo. Bathi kakhulu linamathele izilwane futhi empeleni bajabulela maphakathi ukunakwa (nakuba zingase ngeke ibonise lokhu). Isihluthulelo nithandana umnikazi cat ngokubonisa esilinganayo ukunakwa ekuqapheleni imizwelo yabo.
Kunjalo, kukhona mpikiswano okuningi mayelana nokuthi empeleni enelungelo inyoni njengoba isilwane indlu. Nakuba abanye abantu uthole bazungeza ngokwakha bird ezinkanjini engadini yabo bese enikeza izinyoni zabo inkululeko ukuzulazula mayelana njengoba ngokwemvelo do. Abanikazi Bird ngelinye ilanga baphile izimpilo zabo ngesikhathi futhi kanjalo, ngokuvamile zingatholakala izilungiselelo non-conformist. Baphinde bavame ukuba creative kakhudlwana futhi enesibindi.
Fish njengezilwane ezifuyiwe kukhona eseduze izinto ezingekho Animate njengoba isilwane kungaba. Sure, kuhle ukuba ukubukela izinhlanzi ukubhukuda esitsheni fish noma tank. Nokho, one engakutholi ngempela okuningi ezimbili-indlela ukuxhumana linezinhlanzi. Abantu abajabulela nokugcina fishes njengezilwane ezifuyiwe ngokuvamile ezinokuthula kunabaningi. Nokho, kunjalo futhi oqondile ngaphezu kwabanye abantu futhi ngokuvamile alinandaba ezivamile umphakathi izinkambiso.
Rabbits, hamsters guinea izingulube
Lezi zilwane ngokuvamile more eyayithandwa izingane ezincane nesezikhulile. Kunjalo, kukhona eziningi abadala abagcina ezincane, Izidalwa ubuka njengezilwane ezifuyiwe. Lezi ngokuvamile abantu abenza bajabulela ubudlelwane okuhambisanayo kodwa abukhali ukuze avivinye emhlabathini kuqala mayelana ezifuywayo. Zibuye afudumele futhi obunothando a kuhloswe umthwalo. Lezi abathandi pet kukhona fun enothando ezihlekisayo.
Kuthiwani ngalabo abangenayo ezifuywayo ekhaya? Noma ngisho nalabo abathi abawona yimuphi uthando izilwane? Kulesi sibonelo, nakanjani akusho ukuthi kukhona abandayo onenhliziyo ethandayo noma cha ezimakethe for bangane. Izimo indima ebalulekile ekunqumeni ukuthi umuntu kungaba more bazimisele kunabanye ngumnikazi isilwane. Abanikazi Non-isilwane futhi sibe qotho ngokweqile, onokwethenjelwa futhi onakekelayo!
Kafushane, kungenzeka kakhulu ukuthi nawe Kuyozwakala umnikazi isilwane ongenayo neyodwa of the izimfanelo echazwe ngenhla. Lokhu akusona uhlu eqondile zobuntu ngokwendlela uhlobo lwesilwane ukuthi omunye uthanda. Nokho, ucwaningo olwanele ubelokhu efundelwa ukukhombisa ukuthi kukhona ukuvumelana jikelele on the ngezimfanelo kanye nezici lover isilwane ngasinye kungenzeka ifa. Kungakhathaliseki ukuthi isilwane kugcinwa ekhaya, ubuhlobo namanje sum of izingxenye ezimbili alinganayo phakathi kwabantu ababili izimisele.
Amathiphu Iba Chick Magnet
5 Izinyathelo Izithiyo Ukunqoba Relationship Communication
Indlela Ukuheha the Woman of Dreams Your
Kungani ungakashadi – Dlula Kuyo
What You Need To Know Ngempela: Chivalry uyiNkosi
© Copyright 2019 Usuku My Pet. Made by 8celerate Studio